Wararkii ugu dambeeyay Janaale oo ay la wareegeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliya | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Wararkii ugu dambeeyay Janaale oo ay la wareegeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliya
Wararkii ugu dambeeyay Janaale oo ay la wareegeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliya
Janaale (Halqaran.com) – Ciidanka Xoogga Dalka oo maanta gacan ka helaya Xoogaga Nabad Ilaalinta Midowga Afrika ayaa la wareegay gacan ku haynta Deegaanka Janaale ee Gobolka Shabellaha Hoose.
Ciidanka Xoogga Dalka iyo Xoogaga Amisom ayay saacado badan ku qaadatay inay gudaha u galaan Janaale, kaddib markii ay iska caabin kala kulmeen mintidiinta Al-Shabaab.
Wararka ayaa sheegaya in labada ciidan ay wadada kula kulmeen dhawr qarax, oo midi uu ahaa gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyay, oo uu la socday nin naftii hallige ahaa.
Wararka ayaa waxay intaa ku darayaan in Ciidamada Huwanta ay gudaha u galeen Janaale, iyagoo feejignaan badan ay ka muuqato.
Dagaalyahanada Shabaabka ayaa intii aanay isaga bixin Janaale waxaa la sheegay in biyaha webiga, ay ku soo fatahiyeen wadada laga soo galo deegaankaasi, taa oo wa-xoogaa dib u dhigtay in ciidamada gudaha u soo galaan deegaanka.
Dadka deegaanka ayaa soo sheegaya in maleeshiyada Shabaabka ay isaga baxeen Janaale, Ciidamada Huwantana ay bilaabeen in ay deegaankaasi isu fidiyan.
Ciidanka Xoogga Dalka iyo kuwa Amisom ayaa inta badan Degmooyinka Gobolka Shabellaha Hoose gacanta ku haya, marka laga soo taggo Degmooyinka Kunturwaarey iyo Sablaale, balse dhulalka iyo miyiga gobolka waxaa ku sugan Shabaabka.
ciidamada xoogga oo la wareegay Janaale
dagaal Shabaab iyo Militariga